Dood Furan:- Dantu Miyeey Ku Jirtaa In Dalka Dib Loogu Celiyo 1992-di | Anti-Tribalism
← Yaa Ah Qaswadayaasha ‘Spoilers’?
Yuusuf Indhacadae Oo Si Kulul Uga Hadlay Qaraxii & Digniintii Mahiiga →
Dood Furan:- Dantu Miyeey Ku Jirtaa In Dalka Dib Loogu Celiyo 1992-di
02 May, 2012 – Shirkii kooxda Xiriirka Soomaaliya ICG ee ka dhacay Jabuuti muddo haatan laga joogo 2- bilood ayaa laga alifay Erygaan Qaswadayaal (Spoilers), xiligaasi ayaa Danjire Mahiiga & Gudoomiyihii hore ee Baarlamaaanka ay ku heshiiyeen diyaarinta liiskaan, Laakin Xiligaasi Xildhibaano kaliya ayeey arrintu haatgneyd oo diidanaa Gudoomiye hore.
Dad badan oo Soomaali ah ayaa la yaaban qaab dhaqanka Wakiilka UN-ka ee Somaliya iyo Ergada uu ku qaraabto magacooda, kuwaasoo ku tilmaamtay Soomaalida diidan in qabyo Qoraalka Dastuurka la rabo in lagu dhaqo mustaqbalka Somaliya, liiska qaswadayaasha loo bixiyey ayaa xiligaan u muuqda mid la balaariyay iyadoo la doonayo in Xildhibaanada, Odayaasha Dhaqanka, Culumaa’udiinka iyo Xubnaha kale oo hadda diyaarinta magacyada liiskaasi ay xukuumadda ku hawlan tahay. Isla tallaabooyinkan ayaa markale lagu soo daray odayaal dhaqameed iyo siyaasiyiin si weyn uga horjeeda siyaasadda labada Shariif.
Waqtiga lagu dhawaaqay digniinta waxay ku beegmeysaa iyadoo labo bilood kaliya ay ka harsan tahay waqtiga KMG ah ee dawladda hadda jirta, isla markaana madaxdasare ee KMG ahna ay sheegeninay iyaguna musharixiin yihiin, sidaasi darteedna waxay noqoneysaa in qaar musharixiinta ka mid ah loo jeediyey digniin halka qaar kalana laga aamusay.
Qoraalka hanjabaada xambaarsan ee Wakiilada Qaramada Midoobay, IGAD iyo Midowga Afrika soo saareen shalay wuxuu digniin gaar ah u jeediyey dadka diidan dastuurka iyo kuwa ka hor imaadsan hannaanka roadmapka wax u qorsheeyey iyadoo la og yahay in roadmapka iyo dastuurka ay ku jiri karaan wax xun iyo wax fiican intaba. Markaas ma waxaa fiican in laga doodo oo khaladka laga saaro wixii fiicana lagu taageero mise hadalba ma furna!. Mise waxey ilowsan yihiin Wakiilakaan in 1992 ay ajandayaal ay wateen Ciidamadii Unsom II ee khasabka ahaa ay ku dambyeen dhiig badan kadib fashil iney isaga baxaan magaalada Muqdisho iyagoo guul darro huwan.
Haddiise dimuqraadiyada, siday qabto la fiiriyo adduunyada waxay isku maqashaa aqlabiyad “majority” marka xildhibaanadii 13-kii Disembar riday Shariif Xasan ee 278 ayaa noqonaya qaswadayaal mise kuwa Shariifka taageersan oo ka hor yimid go’aanta inta badan?
Dastuurka diidmadiisa iyo ogolaanshihiisa ma waxaa iska leh Soomaalida mise waa lagu qasbayaa oo talo kuma leh xitaa haddeysan rabin?
Qaswadayaasha ma waxaa loo yaqaan kuwa diidan dastuurka iyo roadmapka mise dadkii dadka xaqdarada ku laayey ee meel walba joogana way ku jiraan? maxaase lagu xukumayaa?
Waa tee cida xaqa u leh inay shaabadeyso qaswadayaasha ma Mahiga iyo Midowga Afrika mise dawlada Soomaaliya? Dastuurka iyo dawladnimaduse yey dan ugu jirtaa?
Habada Akhristayaasha Wadanka.com waxaa ka codsaneynaa iney afkaatooda ku muujiyaan iyadoo la ilaalinaayo anshaxa, isla markaasna aragtida aan lagu saleyneynin Beel iyo shaqsiyaad balse diirada lagu saaraayo sidii xal looga gaari lahaa Khilaafkaan loona badbaadin lahaa iftiinka bidhaamaya ee Nabada iyo amanaaka ay xiligaan ka jirta magaalada Muqdisho.
Danta Dalku Miyee ku jirtaa in xaalada dalku dib loogu celiyo 1992-dii xiligaasi oo Unisom II ay xoog u adeegsatay si ay barnaamij-siyaasadeedka u fuliso, xiligaanse Dan ma u hayaan kooxahan Is-biirsaday ee huwan Magaca UN-ka, AU,da Igad, iney dadka ku qasbaan Qabyo-qoraal duastuur oo Somaliya si xoog ah looga dhaqangelin baro. Maxaase Shacbiga Soomaaliyeed la gudboon.